Daawo muuqaalka: Saraakiil ka Tirsan ciidanka XDS oo Maanta Muqdisho Tababar loogu soo Xiray |
Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maaanta tababar loogu soo xiray magaalada Muqdisho munaasabad ay ka qayb galeen saraakiisha ugu sareysay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya,Amisom iyo saraakiil ka socotay hay’ada Bankrupt oo iyadu ku deeqday Tababarka Saraakiishan.
Saraakiisha tababarka loosoo xiray oo tiradoodu gaareyso 123 Sarkaal ayaa 2 Todobaad qaadanayey tababarkan oo ku saabsanaa sidii ay uga hortagi lahaayeen dhibaatada ay geystaan askarta ay xukumaan,diyaarinta dagaalada,wanaajinta xiriirka ka dhexeeya shacabka iyo ciidanka iyo waxyaabo kale oo ku saabsan arimaha ciidamada ayaa waxaa la gudoon siiyey Shahaadooyin qeexaya wixii ay soo barteen.
Taliyaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Jen. C/qaadir Sheekh Cali Diini oo goobta hadal ka jeediyey ayaa sheegay in Saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Tababarka loo soo xiray ay waxyaabihii ay soo barteen ugu shaqeeyaan sidii loo baray isla markaane ay uga faa’iideeyaan ciidamada ay xukumaan.
Sarkaalka Madaxa ka ah hay’ada Bankrupt oo lagu magacaabo Roje oo isne goobta hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay in hay’ada Bankrupt ay u mahad celineyso cid kasta oo fududeysay hirgalinta Tababarkan wuxuuna hoosta ka xariiqay iney garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.